विश्वकप क्रिकेटः सन्तुलन गुमाएको दक्षिण अफ्रिकाले रोक्ला त वेष्ट इन्डिजका गेललाई ? - माइपोखरी न्युज
Home MAIPOKHARI NEWS विश्वकप क्रिकेटः सन्तुलन गुमाएको दक्षिण अफ्रिकाले रोक्ला त वेष्ट इन्डिजका गेललाई ?
इलाम, १७ जेठः विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगितामा आज वेष्ट इन्डिज र दक्षिण अफ्रिका विचको खेल हुँदै छ । दुई पटकको विश्वकप उचालेको वेष्ट इन्डिजको सामना गर्न एक पटकपनि विश्वकप नजीतेको अभागी टीमको रुपमा लिएको दक्षिण अफ्रिका तयार रहेको छ । यी दुई टीमकोखेल आज नेपाली समयअनुसार ३ बजेर १५ मिनेटमा खेल शुरु हुनेछ ।
दक्षिण अफ्रिकाले यो विश्वकमा पहिलेका ३ खेलमा सन्तुलन गुमाएको छ । उपाधिको दावेदार भए पनि पहिलो खेलमा इंग्ल्यान्डसँग १०४ र दोस्रो खेलमा बंगलादेशसँग २१ रनले पराजित भएको थियो । भारत सँगको खेलमा ६ विकेटले पराजय वेहोरेको छ । आफ्ना तीन खेलमा पराजित हुँदै लय गुमाएको छ । आज वेष्ट इन्डिजसँगको खेलमा पनि दक्षिण अफ्रिका पराजित भएमा अफ्रिकाका लागि विश्वकपलागि सेमिफाईनलको यात्रा लगभग समाप्त हुने छ ।
यी दुईको पछिल्ला ५ भेटमा ३ खेल दक्षिण अफ्रिकाले जीतेको छ भने २ खेल इन्डिजले जितेको छ । विश्वकपमा हेर्ने हो भने यिनीहरुको ६ भेटमा ४ पटक अफ्रिकाले जीतेको छ २ पटक इन्डिजले जितेको छ ।